Fursadaha iyo Caqabadaha haysta dib u doorashada Madaweyne Gaas. | Raadreeb
Fursadaha iyo Caqabadaha haysta db u doorashada Madaweyne Gaas
MW Gaas 5 tii sano ee uu xukunka hayay kuma tallaabsan guulo la taaban karo oo shacabka iyo xubnaha baarlamanka wax dooranaya ku qancin kara in dib loo doorto, waxaana jira in amniga uu aad u liito oo maanta Bossaso saddex cashuurood laga qaado ganacsata ; mid ay qaado Dawladda , mid ay qaato Shabaab iyo mid ay qaato Daacish, waxaana sare u kacay weerarada lagu khaarajinayo askarta iyo ganacsatada magaalada Bossaso.
Badi musharixiinta oo ay suurtagal tahay inay u midoobaan ridista Gaas waa caqabad kale oo laf dhuun gashay ku ah Gaas – Xildhibaanada oo xitaa haddii qaybi ku qanacsantahay dib u doorashada Gaas , walwal badan ka qabi kara xaaladda amni ee Puntland , iyadoo ay dhici karto in carashada shacabka keento in xildhibaanada noqdaan kuwa bartilmaameed sharciyaysan u noqda dilal qorshaysan oo ay fuliyaan kooxaha xagjirka oo ka faa’idaysanaya carada dadwaynaha . Fursadaha uu Haysto MW Gaas.
MW Gaas waxaa lagu tilmaamaa nin qabaw oo aan eed gaara dadka reer Puntland ka gelin, islamarkaasna ku dadaalay inuu yareeyo caburinta dadka siyaasad ahaan uga soo horjeeda.
MW Gaas waxa uu leeyahay khibrad dhanka laaluushka iyo kasbashada isimada qaarkood isaga oo si musuqmaasuqa uga codsanaya qaarkood inay ku taageeran saxiixa si uu u la soo baxo xubno baarlamaan oo codka siiya, waana farsamo la leeyahay waxa uu ka bartay Muqdisho iyo xilliyadii oo federaalka RW ka ahaa.
MW Gaas waxa uu ka faa’idaysan karaa niyad jabka xildhibaanada qaar ka haysta isbedel yimaada , taas oo keeni karta inay isku qanciyaan in intii wax aan la aqoon imaan lahaa xukunka loo dayo MW la yaqaan oo aan xaalka laga dhigin ka dar oo dibi dhal.
MW Gaas waxa uu haystaa malaayiin doolar oo uu ku awoodo inuu ku laaluusho xubnaha baarlamanka taas oo keeni karta in haddii xubno badan oo lacag doona soo galaan baarlamanka ay door bidaan lacagta oo dib u doortaan MW Gaas .
Ka faa’idaysiga guux ka dhex jira qaybo ka mida danlayda siyaasadda Puntland oo ah in sanadka la jabiyo qaabka hagbadda ama meertada xukunka ee gobolada Karkaar , Nugaal iyo Mudug , isaga oo ku qancin kara qaybo ka mida xildhibaanada in hagbadda la jabiyo, waana qorshe uu gadaal ka riixayo Gaas maadaama uu yahay musharaxa ugu culus ee tartanka ugu adag la geli doona musharixiinta badan ee kasoo jeeda Gobolka Karkaar .